China 8.0W / mk akwa kwes conductivity MCPCB maka Electric ọwa emepụta na suppliers | Kangna
8.0W / mk akwa thermal conductivity MCPCB maka ọwa eletriki
Metdị ọla: Isi aluminom
Number nke n'ígwé: 1
Elu: Nweta free HASL
Efere efere: 1.5mm
Ọla kọpa: 35um
Omume Igwe Igwe: 8W / mk
Kwesiri nguzogide: 0.015 ℃ / W
Okwu Mmalite nke MCPCB
MCPCB bụ ndebiri nke Metal isi PCBs, gụnyere aluminum dabeere PCB, ọla kọpa dabeere PCB na ígwè dabeere PCB.
Aluminom dabere na bọọdụ bụ ụdị kachasị. Ihe mgbakwasị ụkwụ nwere isi nke aluminom, ọkọlọtọ FR4 na ọla kọpa. Ọ na-egosipụta akwa mkpuchi nke na-ekpo ọkụ nke na-ekpochapụ okpomọkụ na usoro dị oke mma mgbe ọ na-eme ka ihe dị jụụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-ahụta PCB nke nwere Aluminium dịka ihe ngwọta nke ike dị elu. Aluminom dabeere na osisi nwere ike dochie frangible seramiiki osisi, na aluminom na-enye ike na anwụ ngwa ngwa na ngwaahịa na seramiiki bases enweghị ike.
Ọla kọpa mkpụrụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị oké ọnụ metal, na ya thermal conductivity bụ ọtụtụ ugboro mma karịa nke aluminom substrates na ígwè substrates. Okwesiri ka ikpo oku kachasi elu nke ikuku di elu, ihe ndi ozo na mpaghara ndi nwere otutu mgbanwe di elu na nkwekorita na nkenke.
Igwe mkpuchi mkpuchi bụ otu akụkụ bụ isi nke ọla kọpa, yabụ ọkpụrụkpụ nke ọla kọpa kachasị bụ 35 m-280 m, nke nwere ike nweta ikike na-ebu ugbu a. E jiri ya tụnyere mkpụrụ osisi aluminom, ọla kọpa nwere ike nweta nsonaazụ ọkụ ka mma, iji hụ na nkwụsi ike nke ngwaahịa a.
Nhazi nke Aluminom PCB
Layer Circuit Layer
The circuit ọla kọpa oyi akwa na-mepụtara na etched na-etolite a biri ebi circuit, na aluminom mkpụrụ nwere ike ibu a elu ugbu a karịa otu oké FR-4 na otu Chọpụta obosara.
Na-egbochi oyi akwa
Ihe mkpuchi mkpuchi bụ isi teknụzụ nke mkpụrụ aluminom, nke na-arụ ọrụ nke mkpuchi na nrụpụta ọkụ. The aluminom mkpụrụ insulating oyi akwa bụ kasị kwes mgbochi na ike modul Ọdịdị. Ihe kachasị mma nke nrụpụta nke ihe mkpuchi ahụ, ọ bụ n'ụzọ dị irè ka ọ gbasaa okpomọkụ a na-eme n'oge ọrụ ngwaọrụ, yana ịkọwa okpomọkụ nke ngwaọrụ ahụ,
Olee ụdị metal anyị ga-ahọrọ dị ka insulating metal mkpụrụ?
Anyị kwesịrị ịtụle nke thermal mgbasa ọnụọgụ, thermal conductivity, ike, ekweghị ekwe, arọ, elu ala na-eri nke metal mkpụrụ.
Dị ka ọ dị, aluminom dị ọnụ ala karịa ọla kọpa. Ihe aluminom dị bụ 6061, 5052, 1060 na na. Ọ bụrụ na enwere ihe ndị dị elu maka nrụpụta ọkụ, akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa eletriki na ihe ndị ọzọ pụrụ iche, efere ọla kọpa, efere igwe anaghị agba nchara, efere efere ígwè na mkpụrụ osisi silikọn.
Ngwa nke MPCPCB
1. ọdịyo: ndenye, mmepụta ampilifaya, guzozie ampilifaya, audio ampilifaya, ike ampilifaya.
2. Ike ọkọnọ: Onye na-agbanwe ọkụ na-agbanwe agbanwe, onye na-agbanwe DC / AC, SW regulator, wdg.
3. omogbọala: Onye na-ahụ maka eletrọniki, ọkụ, njikwa ike, wdg.
4. Kọmputa: Ogwe CPU, floppy disk draịva, ngwaọrụ ọkọnọ ike, wdg.
5. Power modul: Inverter, siri ike-ala relays, rectifier àkwà mmiri.
6. Oriọna na ọkụ: oriọna na-azọpụta ike, ọkụ dị iche iche na-acha ọkụ ọkụ na-azọpụta ọkụ, ọkụ n'èzí, ọkụ nke agba, ọkụ mmiri ọkụ
8W / mK akwa ọkụ na-arụpụta ọkụ nke sitere na PCB
N'elu: Duru free HASL
Efere ọkpụrụkpụ: 1.5mm
Ọla kọpa ọkpụrụkpụ: 35um
Omume Igwe: 8W / mk
Kwes eguzogide: 0.015 ℃ / W
Aldị ọla: Aluminom isi
Number nke n'ígwé: 2
Usoro ụdị: Thermoelectric nkewa ọla kọpa mkpụrụ
Omume Igwe: 398W / mk
Design echiche: Nnennen metal ndu, ọla kọpa ngọngọ kọntaktị ebe bụ nnukwu, na wiring bụ obere.
Nke gara aga: 1.6mm ngwa ngwa prototype ọkọlọtọ FR4 PCB
Osote: Mkpa Polyimide gbagọrọ agbagọ FPC na FR4 stiffener